Digniinta Tennessen ee ku saabsan tijaabada COVID-19, isdiiwaangelinta qeybta hore ee bogga
Macluumaadka khaaska ah ama qarsoodiga ah ee adiga kugu saabsan (xiriirka iyo macluumaadka tirakoobka) waxaa soo aruuriyey qandaraasle gobol iyadoo la adeegsanayo diiwaan gelintaas waxaana la siin doonaa Waaxda Caafimaadka Minnesota (MDH). Macluumaadkaaga xiriirka iyo taariikhda dhalashadaada waxaa loo gudbin doonaa Xarunta Caafimaadka Mayo oo ay weheliso muunadada. Ujeeddada ururinta macluumaadkan waa sidii aad ula xiriiri lahayd natiijooyinkaaga imtixaanka oo markaa qandaraasluhu uu ku siin karo soo koobid macluumaadka tirakoobka ee gobolka. Haddii natiijada baaritaankaagu ay tahay mid togan COVID-19 / SARS-Co-V-2, Mayo waa inay fayl garaysato warbixin Waaxda Caafimaadka ee Minnesota taas oo ay kujirto xiriirkaaga iyo macluumaadka juqraafi ee ay weheliso natiijooyinka baaritaankaaga. Waad diidi kartaa inaad bixiso macluumaadkaaga xiriirka ama macluumaadka tirakoobka. Diidmada bixinta macluumaadkaaga xiriirka ayaa ka dhigan in aan lagaa baari doonin.
Haddii aadan buuxin karin diiwaangelinta khadka tooska ah (tusaale ahaan, aadan haysan lambar taleefan ama cinwaan e-mayl ah), la xiriir shaqaalaha kaalmada (email covidresults@state.mn.us) wixii kaalmo ah ee diiwaangelinta ah.
* ayaa muujinaysa meesha loo baahan yahay
Fadlan gali nambarka saaxiibtinimo ee sms si loogu dhawaaqo natiijooyinka dhakhsaha ah
Email ayaa loo baahan yahay haddii aad gashid lambar taleefanka guriga
Taariikh Dhalasho *
January Febtember Maarso Abriil Maayo Juun Luulyo Ogast Sebtember Oktoobar Nofeembar Diseembar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920
Koodhka Boosta *
Kudar kuwa liiska sugitaanka ku jira
Lab Dheddig Sinji Ka Baxsani (Non Binary) Waxaan Doorbidayaa In Aanan Sheegin Prefer to Self Describe
Jinsiyada / Qowmiyadda *
Hindi Maraykan ama Asal Alaaska
Hindi Maraykan ah oo ka soo jeeda Koonfurta ama BartamahaAmeerika
Madow ama Afrikaan Ameerikan
Laatin / Hispanik
Reer Bari Dhexe ama Woqooyi Afrika
Bariga Dhexe ama Raeer Jasiirad Baasifig
Waxaan Doorbidayaa In Aanan Sheegin
Baaritaanka Cudurka Infekshanka ee Bulshada-ku-saleysan ee SARS-CoV-2
COVID-19 wuxuu si fudud oo dhaqso ah ugu faafin karaa kooxo ballaaran oo dad ah oo muddo aad isugu dhow muddo dheer. Dadka qaar ma laha astaamo laakiin wali way faafin karaan fayraska dadka kale. Haddii aad ka qeybqaadatey mudaaharaad, cabsi, ama dhacdo kale oo xaafadeed, waa in aad is baartaa. Goobaha lagu tijaabiyo bulshada waxaa si gaar ah loogu talagalay in loogu adeego kuwa ku nool xaafadaha ugu saameynta badan iyo bulshada ku xeeran.
Maxaa dhacaya haddii aad kaqeybqaadato?
Haddii aadan horay u bixin tan kahor, waxaan ku weydiin doonaa xoogaa su'aalo gaagaaban oo ku saabsan reerkaaga, adiga, iyo carruurtaada (carruurtaada), haddii ay halkan joogaan. Xogwaraysiga kadib, waxaan soo uruurin doonaa sanka iyo / ama hunguriga cunaha ee laga baari doono infekshanka fayraska COVID-19. Waxaan soo uruurin doonnaa muunaddan iyadoo aan loo eegin haddii aad wax calaamadaha ah ama aad qabtid iyo haddii kale.
Haddii baaritaanka neeftaagu uu yahay mid togan:
Xirfad-yaqaan caafimaad ayaa kula soo xiriiri doona 72 saacadood gudahood haddii natiijadaada ama natiijada cunuggaaga ay tahay mid togan. Mar labaad ayaan ku weydiin doonaa waxa ku saabsan calaamadaha, ka wada hadalno sidii loo heli lahaa nabarro dheeraad ah, waxaanan kugula talineynaa lasocodka daryeel caafimaad bixiyahaaga haddii aad leedahay astaamo. Waxaan u baahan nahay inaan u siino macluumaadkan waaxaha caafimaadka gobolka iyo kuwa maxalliga ah sida uu farayo siyaasadaha iyo nidaamka dowladda hoose. Tani waxay kuu horseedi kartaa xiriirinta raadinta iyo ogeysiinta loo-shaqeeyahaaga. Tani waxay u oggolaan kartaa dadka kale inay ogaadaan inaad kaqeybqaadatay daraasaddan waxayna iyaga siin doontaa macluumaad ku saabsan heerkaaga caafimaad ee ku saabsan COVID.
Haddii baaritaankaaga neefta uu yahay mid taban:
Natiijooyinkaaga swab ayaa loo soo diri doonaa si aad ugu gasho shabakad aamin ah oo internetka ama nidaamka wicitaanka taleefanka. Waxaan ku siin doonaa macluumaadkan, iyo sida loo helo marka aad imtixaanka gasho.
Waa maxay waxyeelada ama halisaha aan aniga iyo cunugeygu ka filan karo kaqeybgalka?
Waxyeellooyinka suurtagalka ah iyo halista waxaa ka mid ah: Saqafka sare ee neefsashada ayaa sababi kara raaxo-daro khafiif ah oo dhif ah waxay sababi kartaa dhiigbax sanka ka yimaada ama sababi kara fal-galka fal-celinta. Waxaa jirta halis soo-gaadhista COVID-19 marka aad guriga ka tageyso.
Sidee loo isticmaali doonaa muunaddayda iyo ilmaheyga (carruurtayda) muunadaha iyo macluumaadka?
Saraakiisha caafimaadka dadweynaha ee Qeybta Caafimaadka ee Minnesota iyo Mayo Clinic ayaa u adeegsan doona muunadadaada iyo macluumaadkaaga si ay u qabtaan dabagalka heerka cudurka ee bulshada una sheegaan waaxda caafimaadka dadweynaha ee deegaanka. Kuuma weydiisan doono ogolaansho dheeraad ah si aan ula wadaagno macluumaadkan la aqoonsaday. Waxaa jiri kara waqtiyo ay saraakiisha caafimaadka dadweynaha adeegsanayaan macluumaadkaaga iyo / ama muunada muunadyada ay baran karaan macluumaad cusub. Saraakiisha caafimaadka dadweynaha ayaa laga yaabaa ama inay la wadaagaan natiijooyinkaan.
Xogta kugu urursan adiga ayaa lagaa ilaalin doonaa si qarsoodi ah lagana badbaadin doonaa daah ka qaadistaada. Macluumaadka oo dhan waxaa lagu keydin doonaa keydka macluumaadka ku yaal server-ka amaan ah, iyo kumbuyuutarka kombiyuuterka lagu xiray, iyo password-ka la ilaaliyo. Dhammaan kumbuyuutarrada iyo muunadaha waxaa lagu keydin doonaa dhisme xaddidan, oo marinnada xaddidan ee albaabbada xiran.
Sidee macluumaadka ku saabsan aniga ilaalin doonaa qarsoodi?
Kaqeybgalku wuxuu ku lug yeelan karaa xoogaa luminta asturnaanta. Waxaan ku dadaalaynaa sidii aan u hubin laheyn in macluumaadkaaga qarsoodiga ah loo xafido si qarsoodi ah. Macluumaadkaaga shakhsiyeed waa la bixin karaa haddii sharcigu u baahan yahay.
Ma jiraan kharashyo aniga igu kaca oo layga baarayo?
Maya. Kafaalasho ayaa ogolaaday inuu bixiyo dhamaan ashyaa laxiriira baarista COVID-19; adiga ama shirkadda caymiskaaga biil looma soo dallici doono.
Ayaa bixinaaya lacagta imtixaankaaga? Mashruucan waxaa maalgeliyey Gobolka Minnesota. Kaqaybqaadashadu waa ikhtiyaari.
Dulqaadashada Caymiska Caafimaadka iyo Sharciga La Xisaabtanka ee 1996, Ogaysiiska Dhaqanka Asturnaanta
Dukumintigaani wuxuu sharxayaa sida macluumaadkaaga caafimaad loo istcimaali karo ama shaaca looga qaadi karo, iyo sida aad u heli karto macluumaadkan.
Macluumaadkaaga waxaa lala wadaagi karaa waxyaabaha soo socda:
Mayo Clinic, waa hay'ad caafimaad oo ka shaqeysa samballada shaybaarka
Takhasuslayaasha Caafimaadka ee Holand, Inc., oo ah shirkadda bixisa dhakhaatiirta iyo kalkaaliyeyaasha caafimaad ee kugu soo dabaali doona si ay kuu sharxaan natiijooyinkaaga
Baadhitaannada Aasaasiga ah, Inc., oo ah shirkad ka shaqeysa Waaxda Caafimaadka ee Minnesota si ay u maamusho isqorista, muunadda muunadda, iyo natiijooyinka kuugu soo celiso si dijital ah
Hay'adaha dowladda ee lagu dabaqi karo, sida:
Kuwa mas'uulka ka ah la socoshada amniga xogta la xiriirta mashruuca
Xirfadlayaasha kale ee daryeelka caafimaadka ujeedada ay tahay in lagu siiyo daryeel caafimaad oo tayo leh
Macluumaadkaaga caafimaad sidoo kale waxaa loo wadaagi karaa sida sharcigu farayo
Hawlaha daryeelka caafimaad ee joogtada ah, sida kaydinta diiwaannada caafimaadka ama dib u eegista tayada
Macluumaadkaaga qarsoodiga ah looma sii dayn karo oggolaanshahaaga la'aan qoraal ah ujeeddooyin aan ahayn tan kor lagu sheegay.
Waad la noqon kartaa ogolaanshahaaga siidaynta macluumaadka daryeelka caafimaadka qarsoodiga ah wakhti kasta.
Waxaad leedahay xuquuqo gaar ah oo laxiriira macluumaadka daryeelka caafimaadka qarsoodiga ah. - Waxaad xaq u leedahay inaad codsato xayiraad ku saabsan adeegsiga macluumaadka daryeelka caafimaad ee qarsoon. - Waxaad xaq u leedahay inaad codsato inaan kaala soo hadalno arrimahaaga caafimaad si gaar ah ama goob gaar ah. - Xaq ayaad u leedahay in aad fiiriso, baadho oo aad hesho koobi ah macluumaadkaaga daryeelka caafimaadka qarsoodiga ah. Lacag ayaa laga qaadi doonaa koobiyada iyo dirista. - Waxaad xaq u leedahay inaad codsato isbeddelo ku saabsan macluumaadkaaga daryeelka caafimaadka, haddii aad dareento in macluumaadku khaldan yahay ama aan dhammaystirnayn. - Waxaad xaq u leedahay inaad ogaatid cidda marin u heshay macluumaadkaaga caafimaad iyo ujeedada. - Waxaad xaq u leedahay inaad nuqul ka hesho ogeysiiskan. - Waxaad xaq u leedahay inaad diido ka qeybgalkaaga ama ka qeybgalka cunuggaaga ama kala noqoto ka qeybgalkaaga, waqti kasta.
Digniinta Halista & Qiyaasta Khataraha
Kaqeybgalka baaritaanka COVID-19 waxaa ku lug leh halista caafimaad ee ka dhaxeysa. Waxaa jirta halis soo-gaadhista COVID-19 marka aad guriga ka tageyso. Waxaa jira halis ah in duufsashada sare ee neefsashada ay sababi karto raaxo daro, gag reflex, ama sanka oo dhiig baxa. Dhamaan nidaamyada caafimaad waxay leeyihiin xoogaa khatar ah oo dhaxal ah, oo ay kujirto qatar aan la ogayn Anigoo oggolaanaya kaqeybgalka, waxaan qirayaa in aan fahmay qatarta kaqeybgalka oo si ikhtiyaar ah waan u aqbalaa qatarta caafimaad.
Ka Bixitaan, Siideyn, iyo Bixin La'aan
Waan fahansanahay oo waan qirayaa inaanu jirin qof ama hay'ad caymis ku leh nabadgelyadayda. Waan ogahay in kaqaybqaadashada baaristani ay tahay wax khatar ah oo halista ku dhaca waxaan halkan ku qaadayaa mas'uuliyad buuxda oo buuxda wixii dhaawac ah, jirro, ama shil kasta oo dhici kara inta aan ka qayb qaadanayo. Waxaan halkan ku siidaynayaa, ka tanaasulay, dhawrayaa wax aan dhib lahayn oo axdi ah in aanan dacwad ka gudbin maamulayaasha, kafaala-qaadeyaasha, qaban-qaabiyayaasha, mutadawiciinta, shaqaalaha, wakiilo ama shaqsiyaad kasta oo ku xiran baaristaas dhammaantiis iyo wixii khasaare ah, waxyeelo, deymo ama sheegashooyinka kale iyo sababaha ficil ee ka soo bixi kara ka qaybgalkayga.
Tanaasulidaan waxay kuxiran doontaa kaqeybgale yar hadii uu ogolaado waalidkaa yar ama ilaaliyaha sharciga ah.
Ogolaashaha ayaa looga baahan yahay inuu kaqaybqaato mashruucan.
WAA INAAD I BAAHAN TAHAY. FAHAMKA AAN SAMEEYAAN SITE-ga SITE-gu kama shaqeyn doono PHYSICI DARYEELKA MADAXWEYNE. WAA INUU FAHAN YAHAY IN LA XIRIIRO SAFARKA DUGSIGAAN HADDII HADDII AYUU KUU SAMEEYAHAY WAAN U BAAHAN YAHAY INAAN KU SAMEEYO DIIWAANKA DARYEEL CAAFIMAADKA. WAA FAHAN QOFKA UGU DANBEEYA DALKEYDU WAA AYAA U XANUUNSAN KALIYA SI KASII XIRIIRI KARA MACLUUMAADKA GUUD EE AY HESHIISI KARIN XARUNTA KHATARTA iyo KA HORTAGAAN iyo QAYBTA CAAFIMAADKA MINNESOTOT. WAA LAGU XILSAA WAA MASUULIYAD AMA XUQUUQ KU SAABSAN FARSAMADA LACAG-LA'AAN AMA XARUNKA DAAWAYNTA.
Guji oo jiid jiirkaaga ama fartaaga sanduuqa hoose si aad u saxiixdo
Ma jiraan boosas dheeraad ah oo laga heli karo Incarnation Catholic Church
Ma jiraan boosas dheeraad ah oo laga heli karo United Church of God in Christ
Fadlan guji astaamaha hadda adiga ku haya. Haddii aadan lahayn astaamo, fadlan sii wad.
Qandho ama dhaxan
Daal aad u daran (in ka badan sidii caadiga ahayd)
Wax urinta oo kaa tagta
Neefsashada oo adkaata ama neefsashada oo dhib noqota
Cudurka sanka ama sanka oo dareera
Close contact with an infected person?*
*Have you had close contact (within 6 feet of an infected person for at least 15 minutes) with a person with confirmed COVID-19?
Ikhtiyaar ahaan, u sameyso ballan xubnaha qoyska oo iyaguna u baahan in la baaro.